Maadaama dabaysha iyo qoraxdu ay ka dhigayaan nadiifiyaha korontada ee Minnesota, waxaa sii kordhaya macquul ahaan in ay awood badan ku leedahay dhaqaalaheena koronto. Waxaan isticmaali karnaa shidaal fosil ka yar inta aan sii kordhineyno ganacsiga adeegyadeena deegaanka. Gaadiidka gawaarida ku shaqeeya ee gaasta gawaarida ku shaqeeya waa calaamad muhiim u ah kala-guurka.
Afar jeer oo tayo badan oo ka badan gawaarida gaaska ku shaqeeya iyo abuurista jajabka gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, gawaarida korontada ayaa markasta si sahlan u iibiya marka la eego faa'iidooyinka deegaanka. Halkaa oo ay la socdaan qiiqa cufan, gawaarida korontada waxay hoos u dhigaan qashinka sunta iyo waxyeelada, taas oo keeni karta neefta caruurnimada ah, hawlgabka sanbabada, cudurada wadnaha iyo xitaa dhimasho waqti hore ah. Isbeddelada isbeddelka ee dhawaanahan ayaa sidoo kale sameeyey baabuurta korontada oo aan maskax lahayn marka la eego kharashka.
Afar jeer oo tayo badan oo ka badan gawaarida gaaska ku shaqeeya iyo abuurista jajabka gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, gawaarida korontada ayaa markasta si sahlan u iibiya marka la eego faa'iidooyinka deegaanka.
Gawaarida cusub ee korontada sida Chevy Bolt ayaa leh fursado gaar ah oo ribo ah oo loogu talagalay maamulayaasha duullimaadka kuwaas oo iibsanaya baabuur badan oo u baahan in la kaxeeyo maraakiib badan. Unugyada dowladdu waxay hore u awoodeen inay iibsadaan Bolts, tusaale ahaan, qiyaastii $ 25,000. Wixii baabuur oo dhan koronto leh oo leh 240 miles u dhexeeya eedaymaha, qiimaha qiimaha aan si fudud loo maqlin. Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, Tamarta Cusub ayaa sameeyay qaab lagu maareynayo maamulayaasha gaadiidka kuwaas oo u oggolaanaya inay isbarbardhigaan kharashka baabuurta korontada leh baabuurta gaasta ku shaqeeya ee hadda ay soo iibsanayaan. Qiyaastii ilaa iyo hadda, ilaa hadda, qiimaha dayactirka iyo qiimaha jaban ayaa ka dhigaya gawaarida korontada sida Nissan Leaf iyo Chevy Volt iyo Bolt waxay ka dhigan yihiin qiimaha ugu qiimaha badan ee miiska.
Energy Fresh waa urur madaxbannaan oo madax banaan oo shaqeynaya xawaareynta dhaqaalaha tamarta nadiifka ah. Ka shaqeynta danta dadweynaha, Kooxda Fresh Energy ee aqoonyahanno, qareeno, falanqeeyayaasha, iyo dhaqaaleyahannada ayaa horumarinaya xalka cusub. Sameynta baabuurta korontada ah ee Minnesota waxay ka mid tahay fursadaha xiisaha leh.